“Mibodo Tany” Any Afrika Ve Ny Orinasa Indiana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2013 3:17 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Koa satria ireo orinasa sy governemanta vahiny mividy na manofa tany any amin'ireo firenena manerana an'i Afrika, mbola mitohy ny adihevitra hoe izy ireny ve handrisika ny fampandrosoana na dia fibodoana tany fotsiny amin’ izao, izay mamindra toerana ireo mponina teo an-toerana no sady loza mananontanona ny fahavitan-tena ara-tsakafo?
Vao avy nanoratra ny fidiran'ny orinasa Indiana any Etiopia sy any Mali i Aman Sethi (@Amannama) solontenan'ny The Hindu any Addis Ababa ary nandray anjara tamin'ny resadresaka Q&A (Fanontaniana&Valiny) tao amin'ny Facebook izy tamin'ny 19 May momba ny olana atao hoe : ny fibodoan'ny Indiana tany any amin'ireo firenena ao Afrika.
Nomarihin'i Aman Sethi fa nampiady hevitra ilay fitenenana hoe ” fibodoana tany “:
Heveriko fa io no teboka fototra sy saropady – farafaha-keliny ao amin'ny firenena roa izay hotantaraiko- Etiopia sy Mali- izay misy fifanjevoana mikasika ny taratasy fananan-tany (titre). Any Etiopia ohatra, dia an'ny fanjakana ny tany rehetra ary ampanofaina amin'olon-tsotra na orinasa tsy miankina. Any amin'ny toerana toa an'i Gambella – izay ambarako amin'ny tapany faharoa amin'ny tantara – matetika ireo vondrom-piaraha-monina no efa manana fitakiana iombonana efa vita momba ny tany izay tsy voarakitra ho toy ny an'ny fanjakana. Tena miteraka olana saro-bahàna izany. Inoan'ny governemanta Etiopiana fa ny Fandaharan'asa momba ny Fampandrosoana Kaominaly -na famoaronana tanàna- no hahatsotra ny fampiasana ny tany amin'ny fanomezana taratasy fananan-tany ho an'ireo olona izay apetraka amin'ny alàlan'izay rafitra izay. Mazava loatra fa hitarika fiovàna ifotony amin'ny fomba fahatakaran'ny vondrom-piaraha-monina ny hoe tany izany.
Mikasika ireo andalana ireo ny fanontanian'i Samiksha Srivastava :
i Sethi tsy nieritreritra ny hisian'ny valinteny tsotra ho an'izany, sady nalainy ho ohatra ilay orinasa indiana Karuturi Global nitraka resabe izay voakiana mafy tamin'ny zavatra nataony tany Etiopia :